खेलकुद महासङ्घको प्रदेश प्रमुखमा शङ्कर थापा निर्वाचित :: Times of Pradesh
खेलकुद महासङ्घको प्रदेश प्रमुखमा शङ्कर थापा निर्वाचित
झापा । नेपाल खेलकुद महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा १ नं. प्रदेश प्रमुखमा झापाका शङ्कर थापा निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमाले निकट उक्त जन वर्गीय सङ्गठनले शनिवार काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाले उनलाई सो जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो । महासंघ केन्द्रको भेलाबाट निर्वाचित थापा झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । सो भेलाले महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, उक्त भेलाबाट महासङ्घका संस्थापक प्रथम उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट पुन: प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सुनसरीका विष्टले महासङ्घको १ नं. प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसै गरी, भेलाबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा १ नं. प्रदेशको सह इन्चार्जमा रविन नगरकोटी निर्वाचित भए । मोरङका उनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन् । यस्तै, भेलाले केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा झापा जिल्ला इन्चार्जमा धर्मराज सिवाकोटी, केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला सह इन्चार्जमा अर्जुन मेचे र केन्द्रीय सदस्यमा झापाका उमेश चौंलागाईंलाई निर्वाचित गरेको छ ।
भेलाले केन्द्रीय सदस्य तथा इलाम इन्चार्जमा कुमारी राई, केन्द्रीय सदस्य तथा इलाम सह इन्चार्जमा शिला श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा पाँचथर इन्चार्जमा सुरेश साहलाई निर्वाचित गरेको छ । सो भेलाबाट निर्वाचित महासङ्घका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख स्वयम्भूराज डङ्गोलका अनुसार पुनर्गठित १८४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ४ वर्षे अवधिको हुनेछ ।
भेलाले सातै वटा प्रदेशका लागि महासङ्घको प्रमुख, इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोकेको छ । त्यसअघि शुक्रवार महासङ्घले “खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाऔँ, असल खेल संस्कृतिको विकास गरौँ” भन्ने मूल उद्घोषका साथ विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित अडिटोरियम हलमा आयोजित उक्त भेलाको उद्घाटन सत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रमुख अतिथि थिए । त्यस्तै, बन्द सत्रको प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता गोकर्ण विष्ट प्रमुख अतिथि थिए ।